Usafe Nzara Pamwe Chete: Ine Yakakura Yemahara Gadziriso Inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi iwe unotoziva mutambo wevhidhiyo Usafe nenzara pamwe chete, Zvakanaka, ikozvino une nyowani nyowani inowanika yeLinux uye yakasununguka zvachose kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingoita. Inodaidzwa Kutendeuka kweTides uye ndicho chibudiro chitsva chebasa rekuvandudza Klei Entertainment iro rakawedzera maficha nyowani kupona kwaro uye zita rekushandira pamwe pachiwi chisinganzwisisike.
Sezvo mutambo uyu waburitswa, zvinoita sekunge ivo vanogadzira vanga vachitora kurudziro kubva kuChikepe chakapunzika DLC yeiyo imwechete-player vhezheni yeDont Strave, uye neiyi nyowani nyowani iwe ndichavaka chikepe kutora iwe nevamwe vakapona kuyambuka gungwa uye nekunze kwechitsuwa. Ichi ndicho chiitiko chikuru mushure meKudzoka Kwavo, saka chiito chikuru kune vateveri veiyi zita.
Ivo vanoziva Usafe nenzara Pamwe chete vanozoziva kuti iri wakanaka weird vhidhiyo mutambo, iri indie zita, uye ikozvino nezviri nyowani zvemukati uchave nekuwedzera kushomeka kana zvichibvira. Asi izvi ndizvo zvinoita kuti mhando dzemitambo idzi dzinakidze, izvo zvingangodaro zvisingashamise kune avo chaiwo maficha, asi kuve ne "chimwe chinhu" icho chinoziva kutora vatambi.
Pakati pe zvitsva inowanikwa neiyi yekuwedzera iwe unayo:
ari zvikepe zvekutendera iwe kufamba negungwa pamwe nedzimwe nhengo. Izvo zvinokwanisika kuvaka igwa rakakura zvakakwana kutakura vese vakapona kupfuura nzvimbo dzakaongororwa dzemutambo wepasi.
Iwe zvakare uchave ne nyowani yekuchera menyu menyu, Kukutendera iwe kuti ugadzire zvese zvaunoda kuti ufambe mumakungwa akakwirira.
Inokutendera kuti uongorore chitsuwa chitsva nenzvimbo inoshamisa yemwedzi izere nezvisikwa zvisina kujairika.
También existen nyowani biomes yechitsuwa icho chemwedzi, iine 3 nyowani dzakatakura zviwanikwa zvitsva, uye vavengi vanotyisa.
La kuvheneka yeiri graphic basa rakagadziridzwa. Iye zvino unogona kuona nyika kubva pamaonero matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Usafe Nzara Pamwe Chete - Ine Huru Yemahara Gadziriso Inowanikwa
Yandex Browser, iyo yekuRussia nzira kune Chrome ine Opera's turbo modhi